खुशीको खबर : कोरोनाबारे नयाँ तथ्य पत्ता लगाए वैज्ञानिकले ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/खुशीको खबर : कोरोनाबारे नयाँ तथ्य पत्ता लगाए वैज्ञानिकले !
खुशीको खबर : कोरोनाबारे नयाँ तथ्य पत्ता लगाए वैज्ञानिकले !
29,300 Less thanaminute
काठमाडौं, ६ चैत – कारोना कोभिड १९ अहिले लगभग विश्वभर फैलिएको छ । यसबाट संक्र*मित हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । कोभिड १९ निर्मूल पार्न दुनियाँभरका वैज्ञानिक आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छन् । यसैबीच अस्टेलियाका वैज्ञानिकले पाएको सफलताले यो महामारीमा नयाँ आशा जगाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
पिटर डोहर्टी इन्टिच्युट फर इन्फेक्सन एण्ड इम्युनिटी अस्टे«लियाका शोधकर्ताले हालै कोरोना र हाम्रो इम्युन सिस्टमबारे एक महत्वपूर्ण तथ्य पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकले कोरो*ना संक्र*मित ४० वर्षीया महिलाको रगत जाँच गरेका थिए । जसबाट शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले जसरी आमरुपमा फ्लुसँग लड्छ, त्यसैगरी कोभिड १९ विरुद्ध पनि लड्न सक्छ भन्ने पत्ता लागेको हो ।
मानव शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले कोरोना संक्र*मणविरुद्ध कसरी काम गर्छ भन्नेबारे नक्सांकन भएको र यसको निदानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकले गरेका छन् । कोरोनाबाट संक्रमित ती महिला अहिले स्वस्थ भइसकेकी छन् । यसले कोरोनाबाट बच्न मुस्किल भए पनि असम्भव भने नभएको इसारा गरेको छ ।
पनौतीमा टिपरको ठ’क्करबाट आमा-छोरीको मृ’त्यु